musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » 4 kubva pa5 dzepasi rose dzemahombekombe egungwa dziri muUS
Brazil Kupwanya Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • tsika nemagariro • Entertainment • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
4 kubva pa5 dzepasi rose dzemahombekombe egungwa dziri muUS.
Chidzidzo ichi chakatarisa mahombekombe zana pasirese uye akaaisa pazvinhu zvakaita semamiriro ekunze, tembiricha yemugungwa, mitengo yemahotera, huwandu hwemaresitorendi, uye kukosha kwesocial media kuti vaone kuti ndeapi mabhichi inzvimbo dzakanakisa dzekuenda kuzororo.
Pamwe chete negungwa rakanaka pacharo, kutarisa kumashure kubva kuCopacabana kunokupa maonero eimwe yemaguta anonyanya kukosha pasi rose pasi peziso rakarinda raKristu Mudzikinuri chifananidzo.
Huwandu hwemaresitorendi nemabhawa padyo nemahombekombe i11,153, iyo yakawanda yechero bhichi pane iyo rondedzero.
Mahombekombe mana ekuUS anoumba mamwe emahombekombe mashanu epamusoro, Miami Beach iri pamhenderekedzo yegungwa yezororo muUS uye yechipiri nzvimbo yese.
Nemabhichi ari kugadzira dzimwe dzenzvimbo dzinonyanya kufarirwa dzezororo pakati pevashanyi vekuUS, nyanzvi dzekufamba dzakaratidza nzvimbo dzakanakisa dzezororo remahombekombe pasi rose.
Uye zvinozoitika kuti veAmerica havafanirwe kufamba kuenda kure kuti vaende kumahombekombe egungwa, sezvo mabhichi mana ekuUS ari pakati pemashanu epamusoro.
Top 10 mahombekombe ezororo kutenderera pasirese
chinzvimbo Beach Name Instagram Hashtags Nhamba YemaRestaurant/Mabhawa Mutengo Wepakati Wehotera ($) Avhareji Tembiricha (Farenheight) Avhareji Yekunaya Kwemvura (mm) Avhareji Tembiricha yeGungwa (Farenheight) Total Score
4 Maodzanyemba Beach, Miami 8,200,000 809 $226.05 75.9 1,113 80.6 6.16
Copacabana Gungwa muBrazil inonzi ndiyo yakanakisa bhichi pazororo mukutsvagisa. Pamwe chete negungwa rakanaka pacharo, kutarisa kumashure kubva kuCopacabana kunokupa maonero eimwe yemaguta anonyanya kukosha pasi rose pasi peziso rakarinda raKristu Mudzikinuri chifananidzo. Huwandu hwemaresitorendi nemabhawa padyo nemahombekombe i11,153, iyo yakawanda yechero bhichi pane iyo rondedzero. Pamusoro peizvi, Copacabana inokwana pakati pezvimwe zvinhu zvinosanganisira mahotera, tembiricha yemhepo, uye tembiricha yemvura.
Mahombekombe mana ekuUS anoita mamwe ese epamusoro 5 mabhichi, ane Miami Beach kuisa mahombekombe egungwa akanakisa kuzororo muUS uye nzvimbo yechipiri zvachose. Iri gungwa zvechokwadi nderevapesvedzera uye vashandisi vesocial media, sezvo yakawedzera 14.4 miriyoni hashtag pa Instagram. Izvi zvinoreva kuti ndiyo inonyanya kukosha Instagrammed beach, ine anopfuura 13.7 miriyoni akawanda hashtag kupfuura avhareji yegungwa. Imwe Miami beach iri pachinzvimbo chechina, South Beach, iyo inobata zvakanyanya nekuda kweavhareji tembiricha yemhepo ye75.9 ℉, uye inotodziya mugungwa ine avhareji tembiricha yemvura ye80.6 ℉.
Venice Beach yakatora nzvimbo yechitatu pazere, iine yechipiri-yepamusoro nhamba yemaresitorendi (10,578), pamwe neyechina yakanyanya Instagram hashtag (4.2 miriyoni). Sezvo iri zvakare munzvimbo yeLos Angeles, Santa Monica Beach ine zvibodzwa zvakada kufanana neVenice Beach, chikonzero chega ichidzika pasi (munzvimbo yechishanu) imhaka yemamirioni mazana matatu nemazana manomwe nenomwe e Instagram hashtag.